Home Wararka Farmaajo iyo Rooble oo heshiis gaaray (Aqriso qodobada)
Madaxweyne Maxaxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay, sida uu shaaciyey xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahaim Macallimuu, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in labada mas’uul ay isku raaceen qodobadan.
1- In ayada oo la eegayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, ay madaxda isku raaceen in la dardar geliyo howlaha doorashooyinka, waxaana madax goboleedyada loogu baaqay inay deg deg u billaabaan doorashada golaha shacabka.
3- In wasiirka Amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa, oo aanay waxba iska beddelin.
6- In kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay’adaha caddaaladda iyo garsoorka, waxaana la faray hay’adaha amniga inay u fududeeyaan baaritaanka kiiska.
7- Madaxda waxay u mahad-celiyeen madaxweynaha Lafta-gareen Cabdicasiis Lafta-gareen oo gacan ka gaystay heshiiska.